Olee otú Play MP4 na VLC o
Ndi VLC egwu MP4 faịlụ? Na ọtụtụ mgbe, ọ na-eme. Ma mgbe ụfọdụ, i nwere ike na-abịa gafee dị otú ahụ a ogwu nsogbu dị ka nwoke n'okpuru:
"M nwere ihe MP4 video nke m nwere ike igwu egwu na Windows Media Player, ma VLC apụghị egwu ya. M na-agbalị re-wụnye ọhụrụ VLC ma ọ dịghị chi."
-Ọ Onye ọrụ si videohelp.com
MP4 bụ a multimedia akpa usoro. Dị iche iche MP4 faịlụ na-itinye na koodu dị iche iche na video codecs. Ọ bụrụ na gị MP4 faịlụ bụghị a "adịgboroja" ma ọ bụ ihe rụrụ arụ MP4 faịlụ, ọ pụrụ ịbụ na a video codec nsogbu. Ị nwere ike na-agbalị ọzọ mgbasa ozi ọkpụkpọ na-egwu gị MP4 faịlụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eji VLC Media Player, ị nwere ike tọghata MP4 ka a VLC n'ụzọ zuru ezu na-akwado usoro maka ire ụtọ playback.
Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) bụ a aka nke ukwuu. Ya-enye gị iji tọghata MP4 ka fọrọ nke nta ọ bụla na-ewu ewu ọdịyo na video ouput formats, ọbụna ngwaọrụ. Na kwa, ọ na-ahapụ gị ịgbanwe ụfọdụ dị mkpa video kwa ka video encoder, mkpebi, bit ọnụego na etiti ọnụego. The n'isiokwu a ga-bụ-egosi gị otú dozie MP4 si incompatibility na zuru ezu, n'ihi ya, ị nwere ike igwu MP4 on VLC enweghị ihe ọ bụla nsogbu.
1 Import MP4 faịlụ ka a MP4 ka VLC Ntụgharị
Na-agba ọsọ nke a ngwa, na pịa bọtịnụ na isi menu. Mgbe ahụ, ị nwere ike họrọ MP4 faịlụ site na kọmputa gị mbubata a usoro. Ma ọ bụ, ozugbo ahụ MP4 faịlụ na ị chọrọ na kọmputa, na mgbe mbubata ha a ngwa si ​​ebi ndụ site drap-na-dobe.
Cheta na: E nwere faịlụ ụzọ na ala nke a window. Ọ bụrụ na mkpa, ị nwere ike pịa "..." button re-ịtọ mmepụta nchekwa. Ma ọ bụ converted faịlụ ga-echekwara na nchekwa ndabara.
2 Họrọ a VLC akwado usoro
Dị nnọọ họrọ a VLC akwado usoro na ya mmepụta usoro. Ime ya, ị dị nnọọ see format image na akara ngosi na mmepụta Format ebi ndụ, na mgbe ahụ gaa "Format" Atiya ịhọrọ usoro ị chọrọ, dị ka WMV.
A na ngwa na-enye gị ikike ka video encoder, mkpebi, bit ọnụego na etiti ọnụego. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe ndị a video parameters, dị nnọọ see gear udi nhọrọ na ala nke mmepụta Format ebi ndụ.
3 tọghata MP4 ka VLC
Dị nnọọ amalite MP4 ka VLC video akakabarede site ọkụkụ "tọghata" nhọrọ na ala-nri akuku nke a usoro 's isi interface. A ngwa ga-mezue ọrụ a na a nkeji. Mgbe ahụ, mbubata mmepụta faịlụ ka VLC media ọkpụkpọ. Ị ga-ahụ VLC nwere ike igwu faịlụ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Ebe a bụ video nkuzi maka unu:
> Resource> MP4> Olee otú iji Play MP4 na VLC